महत्वकांक्षाको वेगले ढाल्यो इच्छाराजको साम्राज्य, अर्बपति अब सडकपति बन्दै !
काठमाडौं । भारतीय ‘लिकर ब्यारोन’ विजया माल्यालाई अधिक महत्वकांक्षाले सडकमा ल्यायो । भारतीय मदिरा उद्योगमा लामो समय एकछत्र राज गरेका माल्यालाई किङफिसर एयरले सबै व्यवसाय डामाडोल बनाइदियो ।
उनले स्थापना गरेको सो एयर अहिले बन्द छ । यस्तै उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल लिकर्समा गरेको लगानीसमेत फिर्ता लगिसकेका छन् । भागेर बेलायत पुगेका माल्याले खर्बौं भारु ऋण बैंकलाई नतिरेपछि अहिले अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका छन् ।
नेपालमा घरजग्गा व्यवसायमा एकछत्र भनौं, राज गरेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पनि अहिले माल्याको जस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै समयमा राजसी ठाँट, सान र मान भएका इच्छाराज अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
जीवनमा यस्तो गम्भीर अवस्था आउँछ भनेर सायद उनले केहिले पनि सोचेको थिएनन् होला । घरजग्गा व्यवसायबाट राम्रो कमाइ गरेका इच्छाराज हौसिदै गए । घरजग्गा व्यवसायकका अतिरित्त वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न थाले ।
सिभिल वित्तीय संस्था खोलेका उनको गति त्यतिमै सीमित भएन । एघार वर्षअघि सिभिल बैंक पनि स्थापना गरी छाडे । धेरै लामो प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले इच्छाराजलाई सिभिल बैंक खोल्न दियो । प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि अहिले उनको बैंकको अध्यक्ष पद खोसिएको छ ।
सिभिल सेभिङस एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा सरकारी वकिलकको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ । इच्छाराजलाई संगठित वित्तीय अपराध र ठगी गरेको दाबी सरकारी वकिलको कार्यालयको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अहिले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै ८ वर्ष जेल सजाय र बिगो बराबरको रकम जरिवाना माग गरेको छ । अहिले उनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् ।
व्यवसायलाई तिब्र गतिमा विस्तार गरेका इच्छाराज व्यवस्थापन गर्न असफल हुन थाले र विस्तारै बिग्रिंदै गएपछि उनले सम्हाल्न सकेनन् । जसकारण यस्ता दुर्दिन आए ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको उजुरीमा सीआईबीले तामाङ तथा सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित १२ जनालाई हिरासतमा राखेको छ । १ हजार ४९९ जना पीडित बचतकर्ताबाट ५ अर्ब ६७ करोड ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लिखित उजुरी परेको सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतो बताउँछन् । उनका अनुसार सहकारीमा रकम जम्मा गरेर नपाएका १ हजार ९०० जनामध्ये अझै ४ सय जना सम्पर्कमा आउन बाँकी छन् ।
इच्छाराजले विभिन्न २१ वटा कम्पनी खडा गरी सहकारीको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको वचत रकम लगानी गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये सिभिल होम्सलगायत ३ वटा कम्पनीमा बढी पैसा लगानी भएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकमको सावाँ र ब्याज फिर्ता माग्दा नपाएपछि सीआईबीमा उजुरी हालेका थिए । नजिकका व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर सिभिल बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको आशंकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायबाट इच्छाराजको उदय
इच्छाराजको उदय घरजग्गा व्यवसायबाट भएको हो, यसमा संशय छैन । विभिन्न अपार्टमेन्ट बनाउँदै बेच्दै गर्दा चर्को नाफा भयो । नाफाको पैसा खेलाएपछि उनी हौसिए । त्यो हौस्याइले उनलाई यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न बल पुग्यो ।
रसियाबाट इन्जिनिरिङ अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्किएका इच्छाराजले केही समय पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापन गरे । सोही सिलसिलामासाथीहरुसँग मिलेर २०५७ सालमा सिभिल सहकारी स्थापना गरे । यसरी सिभिल सबैभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बन्योे । तर, उनको गति यहीँनेर रोकिएन । केही समयमै सिभिल वित्तीय संस्था लिमिटेड स्थापना गरे । त्यसलाई सिभिल बैंकले प्राप्ति गरिसकेको छ ।
घरजग्गा व्यवसायमा चम्किएका र व्यापक लगानी गरेका उनको व्यवसाय कोरोना महामारी फैलिएपछि बिग्रिन थाल्यो । नगद रकमको अथाव हुन थालेपछि उनले आफू र श्रीमतीको नाममा रहेको सिभिल बैंकको ५० करोड रुपैयाँ बरारबको सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा बिक्री गरे । तर, दुर्भाग्य ! घरजग्गा व्यवसाय झनै समस्यामा परेपछि सिभिल सहकारीबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् ।
वचतकर्ताले वचत रकम फिर्ता नपाएको गुनासो धेरै आएपछि इच्छाराजले अपार्टमेन्टहरु बिक्री गरेर फिर्ता गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले सहकारीको अधिकाँश रकम घरजग्गामा लगानी गरेको स्वीकारसमेत गरेका थिए ।
सहकारीमा रहेको बचतको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उनले खडा गरेका २१ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी सिभिल होम्समा देखिएको सीआईबीका प्रवक्ता महतो बताउँछन् ।
यसरी घरजग्गा व्यवसाय फस्टाएपछि उनले ‘सिभिल ग्रुप’ नामक साम्राज्य नै खडा गरे । अधिक महत्वकांक्षी उनले क्षमताभन्दा बढी लगानी विस्तार गर्दै गए । अन्तमा त्यही महत्वकांक्षाले उनलाई जेलमा पुर्यायो । अर्बौ रुपैयाँको साम्राज्यलाई गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।
सीआईबीले दिएको जानकारीअनुसार सिभिल सहकारीमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचतकर्ताको छ । यो सबै रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेपछि बचतकर्ताले मागेका बेला सहकारीले फिर्ता दिन सकेन । सहकारीले रकम फिर्ता नदिएपछि उनीविरुद्ध २ वर्षदेखि उजुरी पर्दै आएको थियो ।
इच्छाराज नेकपा एमालेका सांसद पनि भएकाले त्यस बेला राजनीतिक पहुँचका कारण उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् । तर, सरकार परिवर्तनपछि उनका दिन कमजोर बन्दै गए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) परिमार्जन गर्ने बेला उनी अर्थ समितिका सदस्यसमेत थिए । त्यतिखेर उनले आफूअनुकुल ऐन बनाउन तीव्र चलखेल गरेका थिए । अन्त्यमा उनी असफल भए । सफल भएका भए उनको अर्कै कथा हुन सक्थ्यो ।
बाफियाको संसोधन प्रक्रिया चलिरहेको थियो । त्यसबेला संसदको अर्थ समितिमा बाफियाबारे छलफल भइरहेको थियो । समितिको सदस्य रहेका इच्छाराजले ऐन आफूअनुकुल बनाउन सांसदहरुलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । बाफिया संसोधनमा चलखेल गर्यो भनेर मलाई सबैले गाली गरे । अधिकांश मिडियाले पनि बाफिया संसोधनबारे मेरै बारेमा धेरै कुरा लेखे भनेर इच्छाराजले पत्रकारहरुसँग गुनासो गरेका थिए ।
तीव्र महत्वाकांक्षाले अवसान
नेपालका ठूला मध्येको ठगी तथा संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । सिभिल सहकारी खोलेको पछिल्लो वर्ष २०५८ देखि घरजग्गा व्यवसायमा उनको सहभागिता हुन थालेको हो । उनी नेतृत्वको समूहले ललितपुरको भैंसेपाटीमा २०५८ सालमा पहिलो सिभिल होम्स प्रोजेक्टको सुरुवात गरेको थियो ।
नेपालमा व्यवस्थित हाउजिङको सुरुवात उनैले गरेका हुन् । व्यवस्थित अपार्टमेन्टको सुरुवात हुँदै गर्दा उनले कलंकीमा दोस्रो र त्यसपछि ललितपुरको सुनाकोठीमा तेस्रो योजना ल्याएका थिए । त्यसअघि चौधरी ग्रुपले भारतको अन्सल ग्रुपसँगको साझेदारीमा काठमाडौं रेजिडेन्स नामक व्यवस्थित आवास योजना ल्याएको थियो । यो संभवत नेपालको पहिलो व्यवस्थित आवास योजना हो ।
यस्तै ललितपुरको धापाखेलमा दुइटा अपार्टमेन्ट टावरसहित १७४ घर बनाउन चौथो फेजको आवास परियोजनासमेत सुरु गरेका थिए । त्यसपछि झन् उनले फड्को मार्दै जान थाले ।
सिभिल होम्सको फेज ४ र ५ को हाउजिङ परियोजना ल्याए । अहिले फेज ५ का हाउजिङ र अपार्टमेन्ट अझैसम्म पूर्णरूपमा बिक्री भइसकेका छैनन् । सीआईबीका अनुसार अहिले उनले लिएको ऋणभन्दा सम्पत्ति बढी देखिए पनि बचतकर्ताको बचत रकम भने डुब्ने छैन ।
सीटीसी मल लिलामीमा
व्यवसायी इच्छाराजले ऋण नतिरेपछि अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सीटीसी मललाई कर्मचारी सञ्चय कोषले लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चय कोषले उनलाई पहिलो चरणमा ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न समय दिएको छ । सो समयभित्र पनि ऋण चुक्ता नगरे लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी सञ्चय कोषले दिएको छ ।
यस्तै व्यक्तिगत जमानी दिने तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठ, प्रवीण मुखिया र लालकाजी गुरुङसहित ८ जनाको नाम पनि कोषले सार्वजनिक गरेको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न स्थापना भएको सिभिल स्टेटले कोषबाट ऋण लिएको थियो । इच्छाराज र उनका साझेदारले राजधानीको सुन्धारामा रहेको ६ रोपनी जग्गा र सोमा बनेका १३२ एकाइ पसल तथा कबल लिलामी गर्ने कोषले जनाएको छ ।
सेयर बेच्न श्रीमतीसँग नक्कली डिभोर्स
तामाङले श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङसँग नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेर बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री गरेका थिए । सिर्जनाको नाममा रहेको १७ करोड ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्री भएको थियो । सो सेयर आधारदर अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सञ्चय कोषले खरिद गरेको थियो ।
श्रीमान् बैंकको अध्यक्ष भएका बेला एकाघर परिवारका सदस्याको सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्थाले गर्दा इच्छाराजले श्रीमति सिर्जनासँग नक्कली डिभोर्स गरेका थिए । तामाङकी श्रीमती सिर्जना २०७४ सम्म बैंकको सञ्चालक पनि थिइन् । कानुनी उल्झनका कारण इच्छाराज र सिर्जनाले कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेर बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अन्य क्षेत्रबाट पनि ठगी गरेको जाहेरी
सहकारीमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि ठगी गरेका इच्छाराजविरुद्ध थप उजुरी पर्न थालेको छ । हाउजिङ किनेर नपाएका लगायत अन्य पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिन थालेका हुन् ।
सिभिलका बचतकर्ताको मात्र उजुरी आएकामा अहिले सिभिल होम्सको पैसा भुक्तानी गरेर पनि लामो समयदेखि घर नपाएका, सिभिल ट्रेड सेन्टरमा पसल कबल खरिद गरेर पनि नपाएका, सिभिल भवन बनाउँदा उधारोमा समान दिएका व्यापारी र जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएको तर करार ऐनअनुसार भाडा नपाएका पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिन थालेका हुन् ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताका साथै अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर पीडित बनेकाले धमाधम उजुरी दिन थालेको सीआईबीका प्रवक्ता महतोले बताए । उनले पहिलो चरणमा वचतकर्ताको उजुरीको अनुसन्धान पूरा गरेर मात्र अन्य क्षेत्रका पीडितको काम अघि बढाउने जानकारी दिए ।
इच्छाराज–श्रीमती सिर्जना मस्ट वान्टेडमा
संगठित वित्तीय अपराध र ठगी मुद्धामा परेका अध्यक्ष इच्छाराजकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेको छ । सीआईबीले सिर्जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालनसमेत गरेको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष तामाङले सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरे । तर, समयमै निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी नगर्दा प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपरेको मात्र छैन सम्पत्ति शुद्धीकरणको फन्दामा समेत पर्ने देखिएको छ ।
यता तामाङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि नै विभागले तामाङको नाममा स्रोत नखुलेको करोडौं रुपैयाँ रहेको भन्दै विभागले २०७७ चैतमा बैंक खाता रोक्का राखेको थियो । त्यति बेला विभागले ६० करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नभेटिएको जनाएको थियो ।
यसैगरी विभागको अनुसन्धानमा सहकारीको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम नियमविपरीत आफ्ना विभिन्न कम्पनी; सिभिल होम्स, सिभिल होटल, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी, कोत्से भैरव बहुउद्देश्यीयलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको, सिभिल बैंकबाहेक अरू सबै कम्पनी घाटामा देखाएर करसमेत नतिरिएको पाइएको थियो । तामाङले कर नतिरे पनि सम्पत्ति भने बढिरहेको भेटिएपछि राजस्व कार्यालयबाट समेत छुट्टै छानबिन भइरहेको थियो ।
सत्तामा नेकपा एमाले रहेको र उसले आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध कारबाही नगर्ने नीति लिएपछि तत्कालै पक्राउ नगरी बैंक खाता रोक्का राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसयता तामाङमाथि सहकारीका निक्षेपकताको रकम फिर्ता नदिएको भनेर सर्वसाधारण आक्रोशित हुँदै विभिन्न निकायमा उजुरी बोक्दै पुगेका थिए ।
बचकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेपछि २०७६ जेठमा सिभिल सहकारीलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेका थिए । तामाङले सहकारीमा जम्मा भएको रकम विभिन्न कम्पनीका लागि लगेको देखिन्छ । तर, सिभिल होम्सका घर बिक्री गरेर आएको पैसा कहाँ गयो भन्ने देखिँदैन । त्यसैले उनले सम्पत्ति विदेश पुर्याएका हुन् कि भन्ने विभागले आशंका गरेको छ ।
इच्छाराज-सुधीर दुबैले डुबाए सहकारी
घरजग्गाको मूल्य असाध्यै बढेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बबल क्रियट’ हुन थाल्यो । रातारात जग्गाको भाउले वेग हान्न थालेपछि लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउने लक्ष्य नेपाल राष्ट्र बैंकले देख्यो । २०६६ पुस २ गते राष्ट्र बैंकले बैंक सर्कुलर जारी गरी घरजग्गा ऋणमा अंकुश लगायो । बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा परे । त्यस बेलाको संकटमा परेको ग्रान्ड बैंकलाई अहिले प्रभु बैंकले प्राप्त गरिसको छ । घरजग्गा व्यवसायमा अधिक लगानी गरेका बैंकहरु पछि उक्सिन सफल भए ।
२०६६ को राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आयो । त्यसबेलामा चम्किएका इच्छाराजसँगै सोही समयमा घरजग्गा व्यवसायमा प्रभाव जमाउन सक्ने अर्का व्यवसायी थिए, सुधिर बस्नेत । उनी ओरेन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष थिए । विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर हाउजिङ बनाउने तथा जग्गा नै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्यमा बस्नेत संलग्न थिए ।
तर, राष्ट्र बैंकको २०६६ पुसको सर्कुलरपछि घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले बस्नेतको व्यवसाय बिग्रिन पुग्यो । थाम्न नसकेपछि उनी पनि भागे । अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति बेवारिसे जस्तै बन्यो । ओरेन्टल सहकारीमा रकम राख्ने अधिकाँश वचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फस्यो । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोग बस्नेत माथि पनि लाग्यो ।
विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर हाउजिङ बनाउने तथा जग्गा नै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्यमा बस्नेत संलग्न थिए । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोग बस्नेत माथि पनि लाग्यो । उनी लामो समय जेलमा पनि बसे । ओरेन्टलका वचतकर्ताले अझै वचत रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
शनिबार २५ मंसिर २०७८ ०८:४५ AM मा प्रकाशित